संक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक ! (भिडियो ) – चितवन मिडिया
काठमाडौं। हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा अस्पतालमा भ’र्ती भएका कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि भर्ना छन र आमाले झ्यालबाट हेरीरहेकि छिन्। यो तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनायो। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ । बैठकले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । ‘यही वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लागु गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ । के-के बन्द गर्ने र के-के खुला गर्ने भन्ने कुरा केहीबेरमा टुंगिन्छ ।’ एक अधिकारीले भने
सीसीएमसीले पनि १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु गर्न सुझाव दिएको थियो । संयुक्त बैठकअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग परामर्श गरेका थिए ।
यसैबीच कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट नराम्ररी प्रभावित भएको भारतमा ठूला शहरका अस्पतालहरू संक्रमितहरले भरीभराउ हुन थालेका छन् । अक्सिजनकै अभावमा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् ।
त्यो बेला भारतमा जस्तै अक्सिजनको अभाव हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । वितरण प्रणालीमा केही समस्या भए पनि ठूला सहरहरुमा अक्सिजन अभाव हुने अवस्था भने नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता कति ?: स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका पदाधिकारीहरुसँग गरेको छलफलमा एकदमै जटिल अवस्था आयो भने दैनिक पाँच देखि ६ हजार सिलिण्डर अक्सिजनको माग हुनसक्ने आँकलन सुनाएको छ । त्योभन्दा बढी अक्सिजन अहिले नै उत्पादन हुने गरेको कान्तिपुर अक्सिजन उद्योगका अध्यक्ष समेत रहेका शारडाले बताए ।
वितरणमा समस्या : व्यवसायीहरुका अनुसार अक्सिजन उत्पादन पर्याप्त भएपनि वितरण प्रणालीमा भने समस्या छ । नेपाली उद्योगहरुसँग १० लिटरको एउटा सिलिण्डरका लागि १८÷२० हजार लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सिमित सिलिण्डर छन् ।
‘अहिले पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन छ, तर काठमाडौंमा उत्पादन हुने अक्सिजन अन्यत्र पुर्याउन समस्या भएको हो’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘अक्सिजन उद्योग नभएका ठाउँमा हुने ठूलो माग धान्न कठिन भएकाले सरकारले थप सिलिण्डर किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।’ उनका अनुसार थुप्रै सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट नै छ ।Facebook Comments